MADAXWEYNAHA MADAXWEYNAHA MADAXWEYNAHA: Taraamka maxalliga ah wuxuu caddeeyay '' İpekBöceği 'inay ka tayo fiican tahay taayirrada taraamyada caanka ah ee adduunka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMADAXWEYNE RECEP ALTEPE: Gaadiidka deegaanka ayaa sheegay in 'IpekBöceği' ay tayadiisu ka fiican tahay sumadaha tafaftirka adduunka
MADAXWEYNE RECEP ALTEPE: Gaadiidka deegaanka ayaa sheegay in 'IpekBöceği' ay tayadiisu ka fiican tahay sumadaha tafaftirka adduunka
06 / 07 / 2012 16 Bursa, GUUD, tareen, Headline, TURKEY
taraamka 'taraamka iyo jiriqsiga iyo Silk ee dunida-caan, oo tilmaamaysa in tayo sare leh ka badan brand Bursa Duqa Recep Altepe,' Turkey ugu horeysay ee degaanka Waxaan samayn karaa shaqo this 2,5 sano. Waxaan dhisnaa taraamyo, iyo qaar ka mid ah wadahadal ku saabsan jugada. Dalka Swiiserland ayaa taraamka kor u kacaya. "Waannu hadlaynaa," ayuu yidhi.
saarka Bursa Hotel Hilton Duqa Metropolitan Recep Altepe wada socda, dunida ma aha in tartanka ee magaalada, ayuu sheegay in uu jiro waqti for Turkey si waqtiga ka dhumin. Waxa uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo Bursa in ay abuurto badeecooyin iyo noocyo cusub, Altepe wuxuu yiri, "Waxaan u baahannahay inaan hagaajino injineerkayaga oo aan horumar ka sameyno. Waxaan leenahay dad dhalinyaro ah. Waa inaan cusbooneysiinnaa nafteena. Bursa waa inay noqotaa magaalo oo soo saarta magaceeda. Tiknoolajigu mar dambe lama qarin. Hadda waxaa jira tiknoolajiyada adduunka. Waa in aan dadka u hogaansamnaa hal-abuurka. Waxaan nahay degmada. Waxaan qaadeynaa gawaarida tareenka. Waxaan ku siineynaa 8 Milyan Dollar oo gaari ah. 4 xawaaladda 32 kharashka malaayiin doolar. Maxay tahay sababta aysan lacagtaas ugu jirin Bursa? Maxay tahay sababta boqolaal ka mid ah warshadaha ayan u shaqeyn karin? Kama iibinayno aduunka oo dhan sida alaabta Turkiga. Dhamaan shaqooyinkaasi waa shaqaale. Aan sameeyno nidaamyadeena. Aynu xoojino shaqaalahayaga 'ayuu yiri.
'TRAUM OF BURSA WAA ISKU QORO GARMANA'
Trams soo saaray iyo diiwaanka tareenada hoose ee Altunk, 'Waxaan dhahayey inta lagu jiro xilliga doorashadu waxaanan bilaabeynay inaan ka shaqeyno arrintan. Hadda waxaan u baahanahay gaari tareen ah. Waa isku mid. Jarmalka ma ahan wax ka badan. Waxaan ka fiican nahay siyaabo badan. Yurub, 22 waxay leedahay kun shirkadood. Sidoo kale waxaanu leenahay shirkad 22 bin. The Silkworm ayaa sidoo kale tagi doona Berlin bisha September. Tayada taraamku wuxuu ka fiican yahay kuwa kale. Waxaan leenahay xirfad raqiis ah. Timaha Jarmalka waa mid raqiis ah, waxaana nagu soo fool leh. Waxyaalaha wanaagsan "ayaa yiri.
taraamka Turkey ee soo saara 6 dunida. Altepe ayaa tilmaamay in magaalada, laanta Burcad-badeedda ee dhismayaasha madaniga ah ay ka jawaabeen dhaleeceynta xajmiga. Altepe ayaa sii waday:
'Hadda waxaan rabnaa inaan iska ilaalino gaadiidka gudaha. Waxaan dooneynaa inaan waxyaalahaan sameyno halkan. Qaybo ka mid ah maaha kuwo asal ah sababtoo ah ma jiraan wax ogolaansho caalami ah. Boqolkiiba 50 agagaarka tareenka xaafadda. Natiijo ahaan, waddo ayaa la galayaa. Hadaf gaar ah ayaa la gaaraa. Waxaan awoodnay inaan sidan ku sameyno sanadaha 2,5. Sidaas ayaan sidaas samayn karnaa. Waxaan dhisnaa taraamyo, iyo qaar ka mid ah wadahadal ku saabsan jugada. Dalka Swiiserland ayaa taraamka kor u kacaya. 100 waxay samaysay sannado kahor. 3 kun mitir 400 ee buuraha Switzerland, taraamooyinkani waxay soo baxaan. "Miyuu halkan joogi doonaa?"
HUSIIN DURMAZ: 'SHIRKADAHA LAGA BILAABSAN SIYAASADDA'
Durmazlar Hüseyin Durmaz, Gudoomiyaha Gudiga Mashiinka, ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo muhiim ah oo isbadal ah oo ku yimid qeybta mashiinada. Durmaz, Raiisel wasaare Recep Tayyip Erdogan waa inay ahmiyad siisaa bartilmaameedka 2023, isagoo leh, 'warshadu waxay xaqiijisay 6 bilyan oo doollar bishii ugu horreysa ee dhoofinta xNUMX. Waxaan dhawaan dhoofinta 7 bilyan doolar sanad walba. Waxaa jira roodh iyo dhaqdhaqaaq qaybtaan. Waxaan u qaadan karnaa raysalwasaarahaaga tusaale. Waa inaanu beegsanaa yoolalka. Dhammaan shirkadaha waaweyn ee qiimeynta deynta oo qiimeyn siiyay waddammo sannado badan ayaa hoos u dhacay. Waxay carqaladeeyeen adduunka oo dhan. Republic of Turkey ayaa ka badbaaday dhaawac yar shaqada. Waa inaan dejinaa himilooyinkeena istiraatiijiyadeed. Waxaan u nimid maalin noocan oo kale ah in aynaan illoobin. Waa inaan gaarno himilooyinkeena oo aan ka shaqeynaa wax ka badan baabuurta 'ayuu yiri.
'HADDA KOOWAAD SHAQOOYIN KA HELI KARAA 2023'
Marka la sheego in shaqooyinka muhiimka ah ay hoos ugu dhaceen suuq-geynta iyo shirkadaha wax soo saarka, Durmaz ayaa yiri, 'Shirkadaha ku jira shirkadaheena waxay aaminsan yihiin in ay si sax ah u shaqeeyaan. Ma aaminsani. Waxay tagayaan Indonesia si ay ganacsi u sameeyaan. Khayraadka dhulka hoostiisa ah ee Kazakhstan waxa ay dhalinaysaa horumarinta dalka si aad u badan oo aan u aragno. Ma jiraan khayraadka dabiiciga ah ee Indonesia. Dad badan oo saboolnimo ah. Sida loo iibiyo alaabta Heerka koritaanka ee Indonesia laguma barbar dhigi karo Kazakhstan. Waxaa jira tartan weyn oo ku yaal Kazakhstan. Aan ku naqaano saygeena Indonesia ku yaala Kazakhstan. Qofka iibiya wuxuu noqon doonaa gobollo. Waa inaan aragnaa guud ahaan. Waxaan kala duwaneynaa sida mishiinada mashiinka. Shirkadaha waa inay dejiyaan ujeedooyinkooda. Maanta, waxaa jira daabacaadyo badan oo waxbarasho oo ay suurtagal tahay in la arko 2050'liler 'ayuu yiri.
Miisaanka of mishiinka ayaa la soo saaray ee Turkey 5 DOOLAR
Annaga oo ogaaney in Turkey ma joojin karaan 5 doolar halkii kiilo ee mashiinada laga dhoofiyey, halka Germany ka hadlay in qiimaha this euros 100. Haddaba, isaga oo sheegay in Turkiga waa in ay sameeyaan shaqada in hamallıg Durmazlar'Mashiinka aan u dhoofinno culeyska 5 halkii dollar. Inbadan oo ka tirsan Jarmalka anaga ayaa ah. Calool istaagga oo aan noqon alaab cilladaysan? hab No. Waxaan nahay xamaali. Laakiin aynu eegno dariiqooyin aan ku gaabinno wakhtiga si calool-fadhiga u noqdo. Waa inaan isticmaalnaa qaababkan. Calaamadeynta ugu muhiimsan. Ma Nike iyo Adidas ee Turkey? None. Waa inaan uga digno Injineerada marxaladda naqshadeynta. Waxaa jira kumanaan ka mid ah mashiinada wax soo saara ee 22 Europe oo dhan Tirada Tani 22 kun ee Turkey. Wadajrintu way adag tahay in farshaxan-yaqaanadu u wacaan shaqadaas, laakiin waa inaan ka fikirnaa weedhaha iskaashiga.
'HADDII AAD HORUMARINTA XERE XER AH HESHIIS YEAR AH, WAXAAN KA HELI KARAA XERMAHA XNUM'
goolka Turkey ee 2023 Durmaz tilmaamay in ka badan $ 545 billion, sida saarayaasha mashiinka ayaa doonaya inay dhoofiso in ka badan $ 100 billion. Waxaan ogaannay koritaanka 2012 ee 6 boqolkiiba bilihii ugu horreeyay ee 18. Haddii aan sannad walba koraan 15, waxaanu gaareynaa nambarkaas. Waxaa jira shaqo la'aan Yurub ah. Waxaa jira waddamo qallafsan. Mashiinkayaga ayaa koray by boqolkiiba 18. Waa inaan isbedel sameynaa. Waa inaanu fiirino tayada alaabta, suuq-geynta iyo nooca. Waxaan ku guuleysan karnaa ganacsigan "ayuu yiri.
Tram Ipekböceği waxay bixisay macluumaad ku saabsan Recep Altepe Kanal 7
Madaxweynaha Cusub ee Baarlamaanka Recep Altepe oo soo Bandhigay Sawir qaade
Maxay Lindsay ka sheegtay garoonka diyaaradaha saddexaad?
Soo saaray in Bursa, taraamka horeysay wadaniga Turkey ee Silkworm ay ...
Altepe: Waxaan tusnay in aad noqon kartid markab Turkiga oo dhan oo leh silkworm
The Silkworm taraamka hore way soo bandhigay in Germany soo saaray dalka Turkiga
Soo saaray silkworm horeysay Turkey ee gudaha Ray in ay helaan taraamka
70 Bartilmaameedka Qaybta Wax-soo-saarka Qoyska ee Ku-meel-gaadhka ah ee Trolley
dhibbanaha ugu dambeeyay Lodosun ahaa Silkworm Turkey ugu horeysay ee taraamka wadaniga ah
Bursa degmada Metropolitan ee Pioneering soo saaray silkworm, ahaa Pride Turkiga.
Hal-ku-xigeenka Tramway ee Dominik Silkworm wuxuu sidoo kale ka shaqeyn doonaa Izmir
Recep Altepe ayaa wargeyska Bamaaqiga u soo diray wafdiga ka hor (Ilkaha Khaaska ah)
Duqa Magaalada Boosaaso Recep Altepe: Bursa waxaa lagu qalabayn doonaa 8 Tram Line
Rugta Ganacsiga Shaqaalaha Iyada ee Bursa
Ra'iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan
Madaxweyne Recep Altepe
Duqa magaalada Bursa
Shirkadda Silkworm ee Tramway-ka ayaa si toos ah uga soo muuqata Berlin Fair
Taariikhda Tramways iyo Trams ee Istanbul